March 2019 - Myannewsmedia
ကမ္ဘာ​ကျော်​ ရုပ်​ရှင်​တစ်​ခုကို မှီငြမ်းထားတယ်​လို့ ​ဝေဖန်​ခံ​နေရတဲ့ “မုဒြာ​ခေါ်သံ” ရုပ်​ရှင်​ဇာတ်​ကား
March 31, 2019 April 4, 2019 SPACE	0 Comments
ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတီးနားခီရဲ့ ပထမဦးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တဲ့ “မုဒြာခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကတော့ ဇတ်​လမ်းဇာတ်​အိမ်​ ခိုင်​ခိုင်​နဲ့ ကျက်သရေရှိလှတဲ့ မြန်မာ့မြေရဲ့အလှအပတွေကို ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့အပြင် သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ တော်တော်လေး နှစ်ခြိုက်ခဲ့ကြတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးက​တော့ ရုံတင်ပြသတုန်းကလည်း ဝက်ဝက်ကွဲအောင်
အိမ်ထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေကို ပြောပြလာတဲ့ ဒွေးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မိုးမိုး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သရုပ်ဆောင်ဒွေးကတော့ သူချစ်တဲ့မိသားစု၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ ခွဲခွာသွားခဲ့တာ နှစ်အတော်ကြာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သရုပ်ဆောင်ဒွေးကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်မှာတော့ ဇနီးဖြစ်သူ မိုးမိုးတစ်ယောက် သားသမီး (၂) ယောက်နဲ့အတူ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ နှစ်အတော်ကြာသွားရောက်နေထိုင်ပြီး သားနဲ့သမီးကို ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင် စင်ကာပူနိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုချိ်န်မှာတော့ ရန်ကင်းမှာ
ဒုတိယ အချီမှာ ပြိုင်ဘက် ဟာဆီဂါဝါကို ဖြောင့်လက်သီး တစ်လုံး ထိထိမိမိထိုးနိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်လအန်ဆန်ရဲ့ Video ဖိုင်
ONE ဝိတ်တန်းနှစ်ခုချန်ပီယံ အောင်လအန်ဆန်က ယနေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံ၌ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းကာကွယ်ပြိုင်ပွဲတွင် ဂျပန်နိုင်ငံသားကန်ဟက်ဆဲဂါဝါနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လအန်ဆန်ဟာ ယခင် MMA မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ကန်ယက်ဆီဂါဝါနှင့်ရန်ကုန်မြို့တွင် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့ဖူးပြီး အဆိုပါပွဲတွင် အောင်လအန်ဆန်ကနောက်ဆုံးအချီတွင် အလဲထိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ချီအတွင်းအလဲထိုးပြီး မစ်ဒယ်ဝိတ်ချန်ပီယံခါးပတ်ကို ကာကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အောင်လအန်ဆန်း
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျိုမြို့၊ Ryogoku Kokugikan အားကစားခန်းမမှာ A New Era အမည်နဲ့ ဒီကနေ့ ကျင်းပတဲ့ MMA ပြိုင်ပွဲမှာ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မယ့် အောင်လအန်ဆန်ကို ဂျပန်နိုင်ငံရောက်၊ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ လာရောက် အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။တိုကျိုမြို့၊ Ryogoku
ကမ်းခြေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးနဲ့ဖြိုးလေးတို့စုံတွဲရဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းတဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးများ
March 31, 2019 April 4, 2019 phyo	0 Comments
ခပ်မိုက်မိုက် ပုံစံဒီဇိုင်းအလန်းတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို ညို့ယူဖမ်းစားခဲ့တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦးကတော့ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲက အနုပညာလောကကို ဝင်ရောက်လာတဲ့ သူလေးဖြစ်ကာ ယနေ့ထိတိုင်အောင်မြင်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ တစ်နေ့တစ်ခြားလှလှလာတာလည်း သူမရဲ့ အလှတရားလျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ
လွတ်လပ်ပေါ့ပါးတဲ့ ဖက်ရှင်အလန်းစားလေးနဲ့ဘန်ကောက်ကို ရောက်ရှိနေတဲ့ ဒေါင်းနဲ့ ရွှေကစ်တို့ရဲ့ ချစ်စရာပုံရိပ်လေးများ
ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်တဲ့အိုက်တင်အမူအရာတွေကြောင့်ယနေ့ချိန်ထိပရိသတ်အားပေးမှုကိုတစ်ခဲနက်ရရှိထားသူလေးကတော့မင်းသမီးချောလေး ဝတ်မှုန်ရွှေရည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားတိုင်းကိုလည်း ကာရိုက်တာမထပ်အောင်သရုပ်ဆောင်မှုတို့ကြောင့်လည်း ထိပ်တန်းမင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါ။ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ သရုပ်ဆောင်နိုင်မှုတွေကြောင့်လည်း အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပ မှာလည်းပြောစရာ မရှိသလို
How to better grow old in your life
March 31, 2019 April 2, 2019 admin	0 Comments
” How to grow old will questionaformal ward while walking in the park, I suddenly hear.Exact age between
အကြည့်တွေမလွဲချင်လောက်အောင်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးလှနေတဲ့ အူဝဲရဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်များ
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖက်ရှင်ဘုရင်မလို့တောင် အားလုံးကတင်စားခေါ်ဝေါ်နေကြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် တစ်ယောက် The Body Shop ဆိုင်ဖွင့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပွဲတက်ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန် ယက်မှာဝေမျှလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်လေးဆယ်ကျော်အရွယ် ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်လို့ ထင်ရက်စရာမရှိအောင်ကို သူမရဲ့အလှတရားတွေက ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းလွန်းနေပါတယ်။
မိန်းမ မရသေးလို့ သေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး အားတင်းထားတယ်ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် အောင်မြင်မှုတွေ များစွာဆွတ်ခူးရရှိနေတဲ့ အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့ Birthday Show ကြီးကို လာမယ့် ဧပြီလ(၁၀)ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက် Birthday Show ကတော့ (၁၅)ကြိမ်မြောက် ကျင်းပတဲ့ Birthday Show
ဆယ်စုနှစ်တွေ ကြာသည့်တိုင်မပြောင်းလဲသွားတဲ့ အလှတရားတွေနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်တစ်ယောက် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်တွေကို လူမှုကွန်ယက်ထက်မှာဝေမျှခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်လေးဆယ်ကျော် ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်လို့ ထင်ရက်စရာမရှိအောင်ကို သူမရဲ့အလှတွေက ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ ကျော့ရှင်းလှပလို့နေပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးမှာ အေးချမ်းသာယာနေတာကြောင့် စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပြည့်နှက်နေပြီး တနေ့တခြားပိုပိုပြီးလှပလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအဖြစ်နဲ့
မိုးစက်ဝိုင်ရဲ့ အသက်(၃၁)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကို တက်​​ရောက်လာ​ခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော် အနုပညာရှင်များ
အသားအရေ ကြည်လင်လှပစေဖို့အတွက် ညဘက်မှာ ဘယ်လို ဂရုစိုက်သင့်သလဲ?
“ အချစ်ကြီးပြီး အားငယ်တတ်တဲ့ B သွေးလေးတွေရဲ့ အကြောင်း ”
မကြာခင်မှာ သင်တို့ သေချာပေါက် ပြတ်စဲတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြနေတဲ့လက္ခဏာများ
အချစ်ကို လိုက်မရှာတော့တဲ့သူတွေ ( Singleတွေ)သာ တွေ့ရှိရမယ့် ပျော်ရွှင်မှု (၅)မျိုး …
Copyright © 2019 Myannewsmedia. All rights reserved.